ಮೀ ಚಿತ್ತಿ YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e Waaqayyo isa ina hinaafaa ta’u isa sirritti mee itti yaadii.
(ದಿ. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? ಎmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
Fillanno Iyyasuu Saba Isra’el durra ka’e (ದಿ. 15) kun fillanno attamitti? Hara’a nuuf hiika maal qaba?
Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (ದಿ. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
Iyyasuun maaliif itti fufe saba kana qoqobata (ದಿ. 22)?
Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (ದಿ. 23 ಎಂದು 24) mee xinxalii. Maal irra barata?
ಆದರೆ YKN BOODA
Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha miti. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 ಎಂದು 34:14 mee qoradhuu.
Nuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
Tamirat Teshome Dekebo ಮೇಲೆ ಜೂನ್ 25, 2017 ನಲ್ಲಿ 10:57 ನಾನು ಹೇಳಿದರು:
Ararso Korsa ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2017 ನಲ್ಲಿ 4:57 ಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು:
Misganu Gadisa ಮೇಲೆ ಸರಹದ್ದು 23, 2015 ನಲ್ಲಿ 10:00 ನಾನು ಹೇಳಿದರು: